Dugsiga sare - InfoFinland
Nolosha Finland > Waxbarashada > Dugsiga sare
Finland waxaad ka codsan kartaa dugsig sare, marka aad dhammayso dugsiga hoose-dhexe. Waxbarashooyinka dugsiga sare kuwa aqoon guud ah oo ku jihaysan in lagu gaaro shahaadada dugsiga sare. Dugsiga sare wuxuu ardayda u diyaariyaa iskuul xirfadeedka sare iyo jaamacadda.
Dugsiga hoose-dhexe kaddib waxaad sidoo kale codsan kartaa machadka xirfadda. Ka sii aqri macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan machadyada xirfadaha bogga InfoFinlandi Waxbarasho xirfadeedka.
Waxbarashada dugsiga sare waa ka qoraal badan tahay tan waxbarashada xirfadeed. Dugsiga sare waxaa lagu bartaa tusaale ahaan afka hooyo, luqado kale, xisaabta maaddooyinka cilmi-sayniska iyo bulshada. Dugsiyada sare qaarkood waxaa laga bartaa maadooyinka farshaxan oo fara badan.
Dugsiyada sare qaarkood waa dugsiyo sare oo gaar ah. Waxay tusaale ahaan xoogga saaraan muusikada, jimicsiga ama culuunta dabiiciga ah. Dugsiyada sare ee gaarka ah waa ku aad loo jecelyahay. Waxaa laga yaabaa inay adkaato in waxbarashadooda loo gudbo.
Dugsiga waxaad dhigan kartaa adigoo dhalinyaro ama qof weyn ah. Dhalinyaradu waxay wax ka bartaan dugsiga sare ee maalintii (päivälukio) ama dugsiga sare ee aan la joojin (etälukio), dadka waa weyna waxay inta badan wax ka bartaan dugsiga sare ee dadka waa weyn (aikuislukio).
Ururka ardayda dugsiyada sareFinnish | Iswidish | Ingiriis
Codsashada dugsiga sare
Codso dugsi sare heerka labaad ee codsashada tacliimaha. Haddii aad dooneyso dugsiga sare ee dadka waa weyn toos ula xiriir goobta waxbarashada. Ka aqriso xog dheeri ah Dalbashada waxbarashada.
Wax ka barashada dugsiga sare
Waxbarashada dugsiga sare waxay guud ahaan qaadataa sadex sano. Dugsiga sare waxaa sidoo kale lagu dhameyn karaa laba sano ama afar sano.
Waxbarashada dugsiga sare waxaa ku jira waxbaayo badan oo la kala doordooran karo. Waxaad dooran kartaa maadooyinka qasabka ah kadib maadooyin badan oo kale, kuwaas oo adiga kugu haboon. Adiga ayaa saameyn ku leh waxyaabaha aad baraneyso iyo degdeta waxbarashada dugsiga sare.
Dugsiga sare ma lahan lacagta sanad dugisyeedka la bixiyo. Waxbarashadu waa lacag la’aan. Haddii aad dugsi sare billowdo deyrta sannadka 2021 ama kaddib, buugaagta dugsiga sare waa kuu lacag la’aan. Haddii aad dugsiga sare billowday wakhtigaas kahor, waa in adigu gadataa buugaagta dugsiga sare.
Haddii aad leedahay hiwaayad dhib badan ama aad mudo dheer jiran tahay, waxaad dugsiga ku dhameyn kartaa sidii dugsi sare oo fog. Weydii macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan waxbarashada fog dugsigaada sare.
Shahaadada imtixaanka sare
Waxbarashada dugsiga sare waxaa lagu hiigsanayaa shahaadada imtixaanka sare (ylioppilastutkinto). Intixaanka shahaadada sare wuxuu ka kooban yahay imtixaanaad maadooyin kala duduwan ah. Imtixaanaadka shahaadada sare (ylioppilaskoe) waxaa inta badan la qaadaa dhamaadka waxbarashada.
Imtixaanka afka hooyo waa ku qasab shahaadada imtixaanka sare. Imtixaanka luqad hooyo ahaan waxaad ku geli kartaa luqada Finnishka, Iswidishka ama saame, waxaad imtixaanka Finnishka ama Iswidishka u geli kartaa sidii luqad labaad oo kale.
Imtixaanka afka hooyo waxaa dheer oo ay qasab tahay inaad ku guuleystaa ugu yaraan sadex maado oo kale imtixaankood. Haddii aad dooneyso, ka badan ayaad imtixaan u geli kartaa.
Afka hooyo waxaa dheer oo aad imtixaankooda ka qeybgeli kartaa maadooyinka soo socda:
luqada labaad ee dalka (Finnish ama Iswidish)
luqad qalaad: Ingiriis, Jarmal, Ruush, Faransiis, Talyaani, Isbanish, Burtaqiis, Laatiin
waaqici (reaali), maadooyinka aqrinta sida taariikhda, diinta, fiisikiska, kiimikada, bayoolojiga, saykoolojiga, falsafada
Imtixaanada sare waxaa la qabtaa guga iyo deyrta. Haddii aad dooneyso waxaad imtixaanadaas qeyb kamid ah geli kartaa deyrta qeybta kalana guga. Waa inaad imtixaanaadka ku soo bandhigtaa ugu badnaan sadex waqti imtixaan.
Warbixinada shahaadada dugsiga sareFinnish | Iswidish | Ingiriis
Dugsiga sare ee dadka waa weyn
Dugsiga sare ee dadka waa weyn waxaa loogu talagalay ugu horeyn wixii 18 sano ka weyn.
Waxbarashada dugsiga sare ee dadka waa weyn waa mid la bedbedeli karo. Waxaad baran kartaa dhamaan waxbarashada imtixaanka shahaadada sare ama waxaad baran kartaa hal maado oo kali ah. Waxaad ku baraneysaa xawaaraha adiga kugu haboon. Inta badan waxbarashadu waa gelinka dambe.
Dugsiyada sare ee dadka waa weyn qaar badan oo kamid ah waxay koorasyada luqada Finnishka u fidiyaan dadka dalka u soo guuray. Toos u weydii dugsiga sare ee dadka waa weyn koorasyadaas.
Waxbarashada u diyaarinta ah ee waxbarashada dugsiga sare
Waxbarashada u diyaarinta ah ee waxbarashada dugsiga sare, yacni LUVA waxaa loogu talaggalay dadka dalka u soo guuray iyo dadka kale, kuwaa oo aanu afkooda hooyo ahayn Finnish ama Iswiidhish. Inta aad ku jirto waxbarashada LUVA waxaad hagaajin kartaa aqoontaada afka Finnishka iyo xirfadaha kale ee aad u baahan tahay marka aad ku jirto waxbarashada dugsiga sare. Waxbarashada LUVA waxay qaadataa qiyaastii sannad. Waa in aad si fiican u taqaan afka Finnishka ama Iswiidhishka si aad u awooddo la socoshada waxbarashada.
Inta aad ku jirto waxbarashada LUVA waxaad samayn kartaa maaddooyinka waxbarashada aasaasiga ah waxaa kale oo aad sare u qaadi kartaa buundooyinka shahaadadaada waxbarashada aasaasiga ah. Waxaa kale oo aad qaadan kartaa koorasyada dugsiga sare.
Waxbarashada LUVA waad codsan kartaa, haddii aad tahay qof dalka u soo guuray ama afkaada hooyo aanu ahayn Finnish ama Iswiidhish. Waxaa intaas dheer, in aad haysato shahaadada dugsiga dhexe ama shahaado u dhiganta amaba aqoon iyo xirfado u dhigma waxbarashada aasaasiga ah. Waa inaad haysataa sharciga oggolaanshaha dalka si aad u codsato waxbarashada LUVA.
Ka codsi waxbarashada LUVA codsiga waxbarashada diyaarinta ah ee ka dambaysa waxbarashada aasaasiga ah. Wakhtiyada codsiga iyo foomka codsiga ee waxbarashada LUVA waxaad ka heleysaa adeegga Opintopolku.fi.
Codsiga waxbarashada LUVAFinnish | Iswidish | Ingiriis
Markii ugu dambeysay ee waqtiga lala simay: 23.03.2020 Boggan war-celin ka soo dir